Safiir hore oo si adag u eedeeyay Fahad Yaasiin | KEYDMEDIA ONLINE
Safiir hore oo si adag u eedeeyay Fahad Yaasiin
Waxaa sii kordhaya qeyla dhaanta ka soo yeereysa Beesha Caalamka ee ku wajahan xasillooni la’aanta siyaasadeed ee ka taagan arrimaha doorasoyinka Soomaaliya.
WASHINGTON, USA - Safiirkii hore ee Mareykanka u qaabilsanaa Soomaaliya Stephen schwartz ayaa ku eedeeyay madaxa hay'adda sirdoonka Soomaaliya Fahad Yasiin inuu Hay'ada NISA ka dhigay mad loogu adeego Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Stephen Schwartz, oo faallo gaaban ku dhiibtay Twitter-ka, ayaa Taliyaha NISA, Fahad Yaasiin iyo Maalgalya-yaashiisa Dalka Qatar ku eedeeyay in hay’adda Nabad sugidda ka dhigeen “Mid lagu wiiqo dastuurka Soomaaliya , hanaankii dimoqoraadiga ahaa, soo jireenkii is ogolka ku dhisnaa, waxayna gaashaanka u daruureen baaqyada iyo cadaadiska beesha Caalamka”.
Danjire Stephen Schwartz, wuxuu sheegay, in qaabka NISA iyo loo howl galiyay ay “Dhalisay in xaaladda xuquuqul insaanka ay ka sii darto, dawladnimadii macno tiranto, Al-Shabaabka culayskii ka yarayso, taliska Farmaajana uu noqdo mid kaligii ah oo aan wax ixtiraam ah lahayn.
Hadalkaan oo ah mid aan looga baran danjirayaasha ka soo shaqyeeyay Soomaaliya ayaa imaanaya, kadib markii hoggaanka dalka oo dhan uu noqday mid uu daaha gadaashiisa ka maamulo Fahad Yaasiin, oo garab ka helaya Mukhaabaraadka dalka Qatar, oo maalgalin siyaasadeed la garab taagan, si uu danayooda ugu fuliyo.
Saacado ka hor ayay ahayd markii Qaramada Midoobey, Midowga Yurub, Urur Gobaleedka IGAD iyo Midowga Afrika, ay hoggaamiyayaasha Soomaalida ugu baaqeen in dib ugu laabtaan miiska wada hadalka, si dalku u aado doorasho la isla ogol yahay.